Raspberry Pi waxay kordhisaa awoodeeda 512MB oo RAM ah isla qiime | Laga soo bilaabo Linux
Raspberry Pi Waa mashruuc kusii socda kasbashada taageerayaasha isla markaana helay amarro aad u tiro badan oo mararka qaar awoodi waayey inay daboolaan baahida loo qabo qalabkan.
Warka wanaagsani waa in hadda aan heli doonno suurtagalnimada in aan wax ku iibsanno isla qiimo ($ 35) oo ah nooc la hagaajiyay oo ka kooban doona:
Broadcom BCM2835 SoC (processor, GPU, DSP, iyo SDRAM)
Processor: 700 MHz ARM1176JZF-S core (qoyska ARM11)
GPU: Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p30 h.264 / MPEG-4 AVC decoder heer sare ah
Xusuusta (SDRAM): 512 Megabytes (MiB)
Soo Saarista Fiidiyowga: Isku darka RCA, HDMI
Soosaarka maqalka: 3.5 mm jack, HDMI
Kaydinta dusha: SD, MMC, Kaarka SDIO
45/10 RJ100 Ethernet dekedda
Kaydinta iyada oo loo marayo kaarka SD / MMC / SDIO
2 Dekedaha USB
Cajiib, sax? Intaas oo kaliya maahan, waxay ka shaqeynayaan ku dar isaga Raspberry Pi loo yaqaan Ka dag, taas oo, iyo waxyaabo kale, noo oggolaan doonta inaan beddelno midabada shidan iyo ka baxsan. Waxay heli karaan macluumaad dheeri ah oo xitaa amar ka dalban karaan xidhiidhkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Raspberry Pi waxay kordhisaa awoodeeda 512MB ee RAM isla qiimahaas
Uuu, waa hagaag, anigu waxaan sugayaa tayda, Ciida Kirismaska ​​ayay ii soo diri doonaan
Sideen jeclaan lahaa inaan iibsado. Ugu yaraan ma haysto PC guriga. Tan waxaan ku xallin lahaa riyadeyda oo dhan waxaanan sii wadi doonaa isticmaalka TV-ga aniga oo aan iibsan LCD, aad ayey qaali u yihiin, marka lagu daro baabi'inta ku tiirsanaanta PC-ga shaqada. Iyo wixii ka sarreeya, adeegsiga Debian oo aan aad u jeclahay.
Cayayaan yar oo sidan oo kale ah ayaa fiicnaan lahayd in la wado NAS 24/7. Dhawaan, waxaan ka ogaaday mashruuca Raspbian: DEBIAN oo loo habeeyay Raspberry Pi.
Agustingauna 529 dijo
Waxa kale oo jira ArchLinux iyo Fedora: F
Qashinka iyo XBMC waa wax kasta oo qofku u baahan yahay si uu u dejiyo qiime jaban, Ilo Furan iyo xarun warbaahineed oo tayo leh. Nacalaa, mid baan rabaa!
Qiimo wanaagsan oo la awoodi karo!
Jiilka soo socda ee "Steves Wozniak" oo ay ugu mahadcelisay Raspberry Pi ayaa durba leh aaladda caruurtu ku ciyaaraan ee ku habboon tinker iyo dhisidda, dib u soo nooleynta iyo kaamilidda isgaarsiinta telo-bio-psycho-kinetic ee xiriirka berri. Ama iChip-yada xiga ee la geliyey maskaxda.
Midabaynta bogagga ninka
Sida loogu cusbooneysiiyo Ubuntu 12.10 kana soo jeeda Ubuntu 12.04